Soy de Mac dia mpanelanelana amin'ny vondrona Internet AB izay hatramin'ny 2008 dia nizara tamin'ny mpamaky rehetra azy ny vaovao, ny fampianarana, ny tetika ary ny fampahalalana rehetra momba ny haitao amin'ny ankapobeny ary indrindra ny Mac.
Ao amin'ny Soy de Mac dia mazava izahay fa ny zava-dehibe indrindra dia ny mizara fampahalalana betsaka araka izay azo atao momba izay tena mahaliana an'ireo rehetra mitsidika anay ary mila na mitady fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny vokatra na rindrambaiko mifandraika amin'ny Apple sy Mac. Ny vondrom-piarahamonin'ny mpampiasa dia mitombo isan'andro ary isan'andro dia afaka miteny isika fa anisan'ny haino aman-jery manana ny fahefana be indrindra amin'ny Mac sy Apple amin'ny ankapobeny.
El ekipa mpanonta ny Soy de Mac Ireto avy no mpanoratra:
Raha te ho anisan'ny ekipa mpanoratra an'i Soy de Mac koa ianao, fenoy ity takelaka ity.
Mpandrindra ao amin'ny Soy de Mac hatramin'ny 2013 ary mankafy ny vokatra Apple amin'ny heriny sy ny fahalemeny. Hatramin'ny 2012 rehefa tonga teo amin'ny fiainako ny iMac voalohany dia mbola tsy dia tiako loatra ny solosaina talohan'izay. Fony mbola tanora aho dia nampiasa ny Amstrads ary na ny Comodore Amiga nilalao sy tinker aza, noho izany ny traikefa amin'ny solosaina sy ny elektronika dia zavatra ao anaty rako. Ny traikefa azo tamin'ireto solosaina ireto nandritra ireo taona maro ireo dia midika fa afaka mizara ny fahendrarako amin'ireo mpampiasa hafa aho anio, ary mitazona ahy tsy tapaka mianatra koa izany. Hahita ahy amin'ny Twitter ianao tahaka ny @jordi_sdmac
Tamin'ny tapaky ny taona 2000 aho vao nanomboka niditra tao amin'ny ekosistra Mac niaraka tamin'ny MacBook fotsy izay mbola ananako. Mampiasa Mac Mini aho izao manomboka amin'ny taona 2018. Manana traikefa mihoatra ny folo taona amin'ity rafitra fiasa ity aho, ary tiako hizara ny fahalalana azoko noho ny fianarako sy tamin'ny fomba nampianarin-tena.
Mpankafy teknolojia amin'ny ankapobeny sy ny tontolon'i Apple manokana. Heveriko fa ny MacBook Pros no fitaovana tsara indrindra amin'ny paoma. Ny fahamoran'ny fampiasana macOS dia manome anao fahaizana manandrana zava-baovao nefa tsy lasa adala. Ny Touch Bar dia tokony ho voatery amin'ny solosaina rehetra.
Niraikitra tamin'izao rehetra izao noforonin'i Jobs sy Woz, hatramin'ny namonjen'i Apple Watch ny fiainako. Tiako ny mampiasa ny iMac isan'andro, na amin'ny asa izany na amin'ny fahafinaretana. Ny MacOS dia manamora ny fandehany ho anao.
Bachelor of Medicine and Pediatrician amin'ny fiantsoana. Faly amin'ny teknolojia, indrindra ny vokatra Apple, fahafinaretana amin'ny maha-tonian-dahatsoratry ny "iPhone News" sy "avy any Mac aho". Miraikitra amin'ny andiany amin'ny kinova voalohany. Podcaster miaraka amin'ny Actualidad iPhone sy miPodcast.
Mpitia teknolojia, indrindra ny vokatra Apple. Izaho dia nianatra tamina macbook, ary amin'izao fotoana izao ny Mac dia rafitra fiasa izay miaraka amiko isan'andro, na amin'ny fampiofanana na amin'ny fotoana fialam-boly.
Adala amin'ny teknolojia, fanatanjahan-tena ary sary. Tahaka ny maro dia nanova ny fiainantsika i Apple. Ary entiko na aiza na aiza ny mac-ko. Tiako ny mampiaraka amin'ny zava-drehetra, ary manantena aho fa hanampy anao hankafy ity rafitra fiasa ity toa ahy.
Teknolojia mikrôompôtera iray hatramin'ny niandohany, dia liana amin'ny haitao amin'ny ankapobeny aho sy ny Apple ary ny vokatra ao aminy manokana, izay mahaliana ahy an'i Mac. Ankafiziko ny asa sy ny fotoana fialamboly betsaka amin'ny solosaina findainy.
Tena tiako ny vokatra Apple, toy ny olona an-tapitrisany. Ny Mac dia ampahany amin'ny fiainako andavanandro ary ezahiko ento ho anao io.
Developer ao amin'ny rafitra iOS sy IT, mifantoka amin'ny fianarana sy ny firaketana ny tenako isan'andro momba ny rafitra miasa Apple. Mikaroka ny zava-drehetra mifandraika amin'ny Mac aho ary zaraiko amin'ny vaovao hitandrina anao hatrany.
Elektronika Elektronika dia liana amin'ny tontolon'ny Apple ary manokana momba ny Mac, an'ireo izay miloka amin'ny fanavaozana sy ny haitao ho fomba hanatsarana ny tontolo iainantsika. Miankina amin'ny fahafoizan-tena sy fianarana tsy tapaka mihitsy. Ka manantena aho fa ny zavatra rehetra soratako dia mahasoa anao.
Vonona ny hianatra foana aho, tiako ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny teknolojia vaovao sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fanabeazana. Mafana fo amin'ny Mac aho, avy amin'izay ianarako foana, ary mifampiresaka foana mba hahafahan'ny olon-kafa mankafy ity rafitra fiasa lehibe ity.
Fitiavana amin'ny teknolojia amin'ny ankapobeny, ary indrindra amin'ny tontolon'ny Mac. Amin'ny fotoana malalaka ananako dia manokan-tena aho amin'ny fitantanana tetikasa sasany sy serivisy web toa ny iPad Expert, Antontan'isa Coronavirus o Adiresy IP, miaraka amin'ny Mac misy ahy foana, izay ianarako isan'andro. Raha te hahalala ny antsipirihany sy ny hatsaran'ity rafitra fiasa ity ianao dia manantena aho fa tianao ny lahatsoratro.
Ny fanoratana sy ny haitao dia roa amin'ny filako. Ary nanomboka ny taona 2005 dia manana vintana aho hanambatra azy ireo hiara-miasa amin'ny haino aman-jery manampahaizana manokana amin'ny sehatra, amin'ny fampiasana Macbook mazava ho azy. Ny tsara indrindra ve? Manohy mankafy toy ny andro voalohany aho miresaka momba izay programa navoakan'izy ireo ho an'ity rafitra fiasa ity.
Salama e! Mbola tadidiko ihany rehefa nahazo ny Mac voalohany aho, MacBook Pro taloha izay na dia efa antitra noho ny PC-ko aza tamin'izay fotoana izay dia nanome azy arivoarivo. Hatramin'io andro io dia tsy nisy fiverenana intsony ... Marina fa manohy miasa amin'ny PC aho noho ny antony miasa fa tiako ny mampiasa ny Mac-ko mba "hanapaka" ary hiasa amin'ireo tetikasako manokana.